Version 0.6.0 – Na-aga site na ngwa ngwa iji ngwa ngwa
July 29, 2010 site na rịọ 6 Comments
ama ọsọ ọsọ ma ugbu a, ngwa ngwa
Nke a na nsụgharị a bụ isi tọhapụ, e nza ọhụrụ stof a tọhapụ. ya mere ka anyị nwee gafere ndepụta anaghị
Ugbu a, e nwere nkwado maka na akpaaka ogbe translations nke na-eme ka translations kpu mma o ahụmahụ, na mbụ Transposh nwere mara scripts si dị iche iche na akpaaka translation backends mgbe ọ ga-iterate ke kwuo okwu na otu onye na-translations, ugbu a, ndị na-na-grouped ọnụ maka mbenata ọnụ ọgụgụ ndị na-arịọ ka, eziokwu na ọ dịghị mpụga scripts na-loading ebelata complexity na mma ọsọ.
MSN (Bing) nsụgharị ke agaghịkwa chọrọ isi, dị ka ha upgrades ha API na Switched na-eji ngwa isi, ị nwere ike ugbu a dị nnọọ họrọ ndabara translation engine na uche, ma ọ bụrụ na a na engine bụ maka na asụsụ – Transposh ga-amalite na-eji ndị ọzọ otu.
Transposh Google zighachi akwụkwọ nnọchiteanya nke ugbu a gụnyere iji nwee translation n'ihi Alfa larịị asụsụ si Google (na 5 asụsụ ọhụrụ na-akwado – Armenian, Azerbaijani, Basque, Georgian na Urdu) – a zighachi akwụkwọ nnọchiteanya nke na emi odude n'ime ngwa mgbakwunye na redirects arịrịọ iji google ịsụgharị gị na ihe nkesa ikwe ka edemede iji ha. Usoro a adịghị ewe – ọ enwekwu ibu gị na ihe nkesa – ma n'ozuzu adịghị nnọọ ka akwadoro, a ga-tutu amama ndondo Google a na ndị na-asụ asụsụ ka izugbe oriri. Ma, ọ bụrụ na ị nwere mkpa dị ngwa ịsụgharị gị na saịtị na Azeri ndị, ọbụlagodi i nwere ike ime ka.
Na Transposh logo na backlink ike ugbu a n'ebe wijetị, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ nke a – Transposh ga-anwa ime ka ụfọdụ ego ẹdude ad oghere gị sụgharịa peeji nke naanị, ego a ga-enyere anyị mmepe mbọ, ma ọ bụrụ na ị na-ejighi ego ọ bụla gị mgbasa ozi, dị na-njikọ. Okwu bụ nke ogugu ebe a.
Nke ịsụgharị niile button e Damaskọs, ma a ga-Ego ngwa ngwa na iji batching.
Ihe mbụ òkè nke ebe fixes bụ ebe a, m ga-amasị na-ekele Rogelio na Marko ha mo kwuru na onyinye gwara ndị chinchi. Ime mere ke ngwa mgbakwunye nkụnye eji isi mee njehie, ma dị ka anyị na-apụghị mụta nwa ya anyị na-amaghị ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, wee na-agafe anyị mkpịsị aka. Ọ bụrụ na a na-ufụn na merụsịrị agbajikwa gị, biko kpesara ke kwuru ebe a, ike tiketi maka anyị trac. Ebe anyị na anyị twitter na akaụntụ ma ọ bụ anyị facebook peeji nke ma ọ bụ site na-akpọ anyị ekwe ntị, ọkacha mma na 3 na. Ị nwere ike biaghachi nke gara aga version, anyị na-na-mejọrọ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa, Software mmelite Akpado Na: Bing (MSN) nsụgharị, isi, ọzọ asụsụ, tọhapụ, ọsọ nkwalite, WordPress ngwa mgbakwunye